A tọhapụrụ Fedora 34, mara ihe dị ọhụrụ | Site na Linux
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke mmepe na nke mgbanwe dị iche iche ekwuputara na afọ gara aga na nke ọtụtụ n'ime ha anyị kesara ebe a na blog, A tọhapụrụ ụdị nkwụsi ike nke Fedora 34 ma dị njikere maka nbudata.
Versiondị ọhụrụ nke Fedora 34 gụnyere ọtụtụ mmụba ama ama nke bara uru iburu n'uche, ebe ọ bụ na ọtụtụ mgbanwe metụtara arụmọrụ arụmọrụ na ọkachasị ngwaike.
1 Main ọhụrụ atụmatụ nke Fedora 34
2 Budata Fedora 34
Main ọhụrụ atụmatụ nke Fedora 34
Ọhụrụ a version anyị nwere ike ịhụ ihee ebugharịla egwu egwu ọ bụla na ihe nkesa mgbasa ozi PipeWire, nke bụ ugbu a ndabara kama PulseAudio na JACK na bụ na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na PipeWire dị elu n'ọtụtụ akụkụ, a na-eburu ojiji nke Wayland, na mgbakwunye na mkpokọta na desktọọpụ KDE na-akwaga jiri Wayland si Site na ndabara, oge X11 na-akwalite nhọrọ.
Ma ọ dịkwa na-ekwu maka wayland, Fedora abụrụla ihe nlele na Fedora 34 na-akwado nkwado Wayland, dị ka ikike iji jiri XWayland akụrụngwa gbakwunyere na sistemụ nwere ndị ọkwọ ụgbọala NVIDIA.
Na gburugburu ebe obibi Wayland, headless mode ọrụ nkwado na-emejuputa atumatu, na-enye gị ohere ịme ihe desktọọpụ na sistemụ ihe nkesa dịpụrụ adịpụ site na ịnweta site na VNC ma ọ bụ RDP.
Ebugharịrị Xwayland DDX akụrụngwa na ngwugwu dị iche nke emepụtara site na koodu koodu ọhụrụ nke na-adabereghị na nsụgharị siri ike nke X.Org Server.
Mgbanwe ọzọ dị mkpa bụ na emelitere Fedora 34 GNOME mbipute 40 na ọba akwụkwọ GTK 4. Na GNOME 40, desktọọpụ arụmọrụ na Ihe Nlekọta Ọrụ na-ahazi na nhazi ihu ala ma na-egosi dị ka aka na-aga n'ihu site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Okpokoro ọ bụla gosipụtara na nyocha nyocha na-egosi windo ndị dịnụ, nke na-agagharị ma na-atụle site na mmekọrịta onye ọrụ, yana ịnye ntụgharị na-enweghị ntụpọ n'etiti ndepụta mmemme na desktọọpụ arụmọrụ.
N'aka nke ọzọ, n'ụzọ zuru okeA kpaliri mbipụta niile nke Fedora iji usoro systemd-oomd maka nzaghachi oge na ncheta sistemụ dị ala kama usoro nke earlyoom.
Anyị nwekwara ike ịchọta nke ahụ usoro faịlụ Btrfs, nke bụ ndabara na nsụgharị desktọọpụ Fedora (Fedora Workstation, Fedora KDE, wdg) ebe ọ bụ na nke ikpeazụ, gụnyere nghọta transperent data site na iji ZSTD algorithm. Mkpakọ bụ ndabere maka nrụnye ọhụrụ nke Fedora 34.
Na mbipụta IoT, nkwado maka efere ARM Pine64, RockPro64 na Jetson Xavier NX, na nkwalite nkwado maka mbadamba i.MX8 SoC dị ka Thor96 96boards na Solid Run HummingBoard-M. Ejiri usoro nche ngwaike ngwaike maka mgbake sistemụ akpaka.
Emegharịrị mkpụrụ edemede FreeType iji jiri ihe nlele nke HarfBuzz glyph. Iji HarfBuzz na FreeType emeela ka ezigbo ntụnye ka mma.
Ewepu ikike iji gbanyụọ SELinux n'oge na-agba ọsọ; Akwụkwaghị ike site na ịgbanwee ntọala. Mgbe mbido SELinux, ndị ọkwọ ụgbọ ala LSM na-agụzi naanị, na-emezi nchebe megide mwakpo ebumnuche iji gbanyụọ SELinux mgbe ha jisịrị ike na-agbanwe ọdịnaya nke nchekwa kernel.
Ọzọkwa, A maliteghachiri ọrụ niile nke usorod emelitere ozugbo mgbe ịmechara azụmahịa na njikwa ngwugwu RPM. Ọ bụrụ na mbu ọrụ amalitegharịrị mgbe emesịrị ngwugwu ọ bụla gafere ya, a kpụrụ ahịrị kwụ ọtọ ma malitekwa ọrụ ndị ahụ na ngwụcha oge RPM, mgbe emesịrị ngwugwu na ọba akwụkwọ niile emelitere.
Budata Fedora 34
N'ikpeazụ, maka ndị niile chọrọ inwe ike nweta onyonyo ọhụụ nke sistemụ a ma wụnye nkesa Linux a na kọmpụta ha ma ọ bụ naanị chọọ ịnwale sistemụ ahụ n'okpuru igwe arụmọrụ.
Just ga-agarịrị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke nkesa na ngalaba nbudata ya ị nwere ike nweta ihe oyiyi sistemụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Emeelarị Fedora 34, mara ihe dị ọhụrụ
A tọhapụrụ GCC 11.1, ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa ya na mgbanwe ya